Spaghetti na garlic prawns | Ntụziaka nri
Spaghetti ya na galik
Maria onyekwere | | achịcha dị iche iche
Ike Gwụrụ nke na-akwadebe pasta mgbe niile n'otu ụzọ? N'ebe a, ị nwere usoro ọhụụ nke ị ga-eji gbanwee menu gị: Spaghetti ya na galik. Ntụziaka na ekpomeekpo mmiri nke ga-ewe anyị ogologo oge na kichin na m nwere ike ịkwado gị na ị ga-atọ ụtọ nke ukwuu.
Na mgbakwunye na iji isi na shells nke prawns mee ka ọkụ dị mfe, usoro nri na-etinye cayenne chillies iji nye ya oseose ebe. Onwe m hụrụ ya n'anya n'ihi na ọ dị aghụghọ, mana ị nwere ike ịme ya ma ọ bụrụ na ị bụ enyi na oseose. Na-anwa anwa ịnwale ya?
Oge niile: 40 m
190 kr. spaghetti
Akara 350 nke prawn
3 cloves nke garlic
3 tablespoons ọhụrụ pasili
4 okpokoro brandi
Anyị na-ekpochapụ prawn ma tinye isi na akpụkpọ ahụ n'ime ite mmiri na nnukwu ngaji mmanụ oliv. Esi nri karịrị ọkara okpomọkụ mgbe anyị azọpịa isi nke prawns na ngaji slotted ka ha wepụta ihe ọ theirụ theirụ ha niile.
Mgbe shells bụ pink, anyị na-webata brandi na anyị na-ahapụ ya ịda mbà fọrọ nke nta ka kpamkpam.
Ya mere, anyị tinye otu iko mmiri, kpuchie ma sie nri maka oge 15. Anyị na - akpacha akpụkpọ ahụ na isi anyị iji nweta broth a ga - echekwa.
Anyị na-esi nri spaghetti n'ime ite na mmiri na nnu, soro ntuziaka ndị emepụtara. Ozugbo emere, igbapu na idobere.
Mgbe pasta na-esi nri, anyị na-etinye galik nke ọma na chilli na anyị na-edebe.
Kpoo ngaji 3 nke mmanụ oliv n’ime ite eghe n’ọkụ. Anyị na-agbakwunye prawn na mgbe ha na-pink na ubé ọlaedo, anyị na-ewepụ ha.
Anyị na-agbakwunye otu tablespoons ma ọ bụ abụọ karịa mmanụ na pan na gbanye galik na chili. Mgbe galik malitere ịcha ụcha, tinye ọkara oporo oporo ma belata parsley ọhụrụ, ma wulite ọkụ iji weta ihendori ahụ na obụpde wee belata.
Anyị na-etinye spaghetti na pan na mix nke mere na ha na-ọma impregnated na ihendori. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, tinye obere broth ka ha ghara ihicha.
Tupu anyị eje ozi, anyị na-etinye prawn.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Inicio » Efere » achịcha dị iche iche » Spaghetti ya na galik
Salmọn na ụtọ chili ihendori
Akwukwo nri akwukwo nri na toki na ude